အာယာသွလ္လာဟ် စါဖီ နှင့် ဟောင်ဇေ အေလ်မီယာ ကွမ်း အကြီးအကဲများ တွေ့ဆုံ /photos
စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၁၆ - ၇:၃၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ စါဖီ ဂိုလ်ဗိုင်ဂါနီ နှင့် ဟောင်ဇေ အေလ်မီယာ ကွမ်း အကြီးအကဲများ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် အာယာသွလ္လာဟ် ၏ရုံးတွင် တွေ့ဆုံ စကား ဆို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။
အာယာ သွလ္လာဟ် စါဖီ နှင့် (ဘာသာကြီ များ နှင့်ဖေရ်ကာ များ ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ) ကျောင်းအုပ် နှင့် အဖွဲ့ မှ တွေ့ဆုံ /photos
စကျတငျဘာ ၁, ၂၀၁၆ - ၈:၁၇ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာရှိက်္ခ စါဖီ နှင့် (ဘာသာကြီများ နှင့်ဖေရ်ကာများ ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ) ကျောင်းအုပ်နှင့် အဖွဲ့ မှ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ခါသင်းမ်မိုလ်အန်ဗီယာ (ဆွ) လေတပ်အရာ ရှိများ ရဲဟဗ် အင်ကေလာဗ်တွေ့ဆုံ /photos
ဩဂုတျ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၄ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ ခါသင်းမ်မိုလ်အန်ဗီယာ (ဆွ) လေတပ် အရာ ရှိများ ရဲဟဗ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယ်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဤတွေ့ဆုံမှာ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကွမ်း မြို့ မှ ခြေလျင်ထွက် ဇေယာရသ်ပြု အုပ်စု မရ်ှဟဒ် မြို့  သို့ရောက်ရှိ /photos
ဩဂုတျ ၂၇, ၂၀၁၆ - ၁၂:၁၂ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ နှမတော် ၏ရောင်ဇာရှိသည့် ကွမ်းမြို့ မှ သခင်ကြီး ရှိရာ မရ်ှဟဒ် သို့ အုပ်စု တစ်စုမှ သခင်ခကြီး ၏ ဇေယာရသ်ပြုနိုင်ရန် ခြေလျင်ထွက်ခဲ့ရာ အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရွှေထည် ပစ္စည်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိထားစရာ ၅ ချက်
ဩဂုတျ ၂၆, ၂၀၁၆ - ၅:၂၃ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ ရွှေ ထည် ပစ္စည်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိထားရမည့် အချက်လေးများကို ဖော်ပြပေးပါ။
အဆဲ နှင့် မရ်ဂျာများ၏ အဖြေ
ဩဂုတျ ၂၆, ၂၀၁၆ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မေးခွန်း ။ ။ ညစ်ညမ်းသည့် စကား ဖြင့် ဆဲခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကို ပြုနိုင်ပါသလား ?
အိမ်သူအိမ်သားများကို ဖဂျရ်နမာဇ် အတွက် နိုးထစေခြင်း ကိစ္စ
ဩဂုတျ ၂၅, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၇ ညနေ
မေးခွန်း ။ ။ မနက်ဖဂျရ်နမာဇ်ဝတ်ပြုရန်အတွက် မိမိ၏ အိမ်သူအိမ်သားများကို အထူးသဖြင့် ကလေးများ နှင့်ဇနီးအား နိုးပေးရန် ကျနော်တို့ အပေါ်ဝါဂျစ်ဗ်ဖြစ်ပါသလား ?
ဘာလင်ရှိ ဆော်ဒီ သံရုံး ရှေ့ တွင် ဘာရိန်းပြည်သူ၊ပြည်သားများ ဆန္ဒပြ /photos
ဇူလိုငျ ၂၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၂၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဘာရိန်း ပြည်သူ ပြည်သားများ အနေဖြင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံ အတွင်း ရှီအာ များအပေါ် မတရား သတ်ဖြတ် ၊ရက်စက် ယုတ်မာနေမှု ဘာသာရေး အစီအစဉ်များကို လွတ်လပ်စွာ မပေး လုပ်၊မှု စသည်တို့အတွက် ဘာရိန်း ဘုရင် အာလေခလီဖွာ ကို အား ပေးအားပြု ကြိုးကိုင်နေသည့် ဆော်ဒီ အား ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသည့်အနေဖြင့်၎င်း တို့၏ သံရုံးရှေ့ တွင် သပိတ်ပြခဲ့ပါသည်။
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ်ဘရူ ဂျိုရ်ဒီ အတွက် နှစ်ပတ်လည် မဂ်ျလစ် ၊ကွမ်း /photos
ဇူလိုငျ ၂၁, ၂၀၁၆ - ၁၂:၀၅ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ (၅၇)ကြိမ် မြောက် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ်ဘရူ ဂျိုရ်ဒီ အတွက် နှစ်ပတ်လည် မဂ်ျလစ် ကို ကွမ်းမြို့ ရှိ မစ်္စဂျစ်ဒ် ဒေအာဇန်းမ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် အွစ်စတတ် ရှိက္ခ် အန်ဆွာရီ မှ တရား ရေအေးတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းတကာ့ ထွဋ်ခေါင် မေတ္တာ ရှင် ဦးဆောင် သည့် အဇါဒါရီ နှင့် နမာဇ် /photos
ဇှနျ ၂၉, ၂၀၁၆ - ၈:၂၅ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အကောင်းတကာ့ ထွဋ်ခေါင် မေတ္တာ ရှင် ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ဦးဆောင်သည့် အေမာမ်အလီ (အ.စ) ၏ အဇါဒါရီ နှင့် နမာဇ်စေဂျမာအသ် ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီ နှင့်နယ်သာလန် ရှီအာ အာလင်မ်များနှင့် သာသနာပြုများ ဆိုင်ရာ (၁၀) ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေး / photos
ဇှနျ ၁၅, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၉ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ ဂျာမနီ နှင့်နယ်သာလန် ရှီအာ အာလင်မ်များနှင့် သာသနာပြုများ ဆိုင်ရာ (၁၀) ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေး ပွဲကို ဟမ်းဘတ်မြို့ အစ္စလာမ့် စင်တာ တွင်ယနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ကို ဂရုပြုရန်အရေးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၇)ကြိမ် မြောက် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အတွက် ကုရ်အာန်ခွာနီ ၊ကွမ်း /photos
ဇှနျ ၃, ၂၀၁၆ - ၆:၀၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ ၏ တော်လှန်ရေးဖခင်ကြီး ဟဇရသ် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် အမိန့် ခံယူသည့် (၂၇) နှစ် မြောက် အထိမ်းမှတ်ဖြင့် ကုရ်အာန် ခွာနီ နှင့် မဂ်ျလစ် ကို သခင်မကြီး မာစူမာ ကွမ်း (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် အတွင်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မရ်ဂျာတော်များ အာလင်မ်ကြီးများ နှင့်မိုအ်မေနီ မိုအ်မေနသ်များ တက်ရောက် နေရာယူခဲ့ပါတယ်။
အူလူးမေ အကဲလ်လီ ဆရာများ နှင့် အာယာသွလ္လာဟ် စိုဗ်ဟာနီတို့၏ ညီလာခံ /photos
ဇှနျ ၂, ၂၀၁၆ - ၁၀:၁၃ ညနေ
အဗ်နာ ။။ အူလူးမေ အကဲလ်လီ ဆရာများ နှင့် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ စိုဗ်ဟာနီ တို့၏ ညီလာခံ ကို ကွမ်းမြို့ တွင်မနေ့က ကျင်းပါခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အတွက် နှစ်ပတ်လည် မဂ်ျလစ် ကျင်းပ၊ကွမ်း / photos
ဇှနျ ၁, ၂၀၁၆ - ၁၁:၀၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ ရှိ မဒရ်ဆာယေ ဖိုင်စီယေ တွင် အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အတွက် နှစ်ပတ်လည် မဂ်ျလစ် ကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) မြေးများမှ တစ်ပါး ဖြစ်သူ H.I ဆယက်ဒ် အလီ ခိုမေနီ မှ တရားဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် မှ ရှဟီးဒ် ဗဒရွဒ်ဒီးန် ၏ သား အား လက်စွပ် ချီးမြှင့် / photos
မေ ၂၇, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာအီ မှ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့် က ဆီးရီးယားနိုင်ငံ စမတ်စကတ်မြို့ လေဆိပ်အနီး ဝဟာဘီများ၏ လက်ချက်ဖြင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဟေစ်ဘွလ္လာဟ် အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ကြီး ဆယက်ဒ် မွတ်စတဖွာ ဗဒရွဒ်ဒီးန် အိမ်သို့ ကြွရောက် လာပြီး မိသားစုဝင်များ ကို တွေ့ဆုံအားပေးရင်း ရှဟီးဒ်၏ သား အား မိမိ လက်စွပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အား မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် တွေ့ရစဉ် / photos
မေ ၂၂, ၂၀၁၆ - ၁၂:၁၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာအီ အား မစ်္စဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရန် တွင် အေဗါဒသ် ပြုနေစဉ် တွေ့ရသည့် ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး မရ်ဂျာများ နှင့်တွေ့ဆုံ / photos
မေ ၁၃, ၂၀၁၆ - ၇:၂၁ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ အီရန် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး အလီဂျန္နသ်သီ နှင့် အီရန် ဟဂ်ျနှင့်ဇေယာရသ် ဝန်ကြီး စအီးဒ် အောင်ဟေဒီတို့ အနေဖြင့် ကွမ်းမြို့ ရှိ မရ်ဂျာတော်များ မှ ၅ ပါး နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ်အလီ (အလိုင်ဟစ်စလမ် ) ၏ ရောင်ဇာတော် အတွင်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် သေလာဝသ် အခမ်းအနား / photos
မေ ၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ်အလီ (အလိုင်ဟစ်စလမ် ) ၏ ရောင်ဇာတော် အတွင်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် သေလာဝသ် အခမ်းအနားကို ကျက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ဂျေဟာဒ် ဒေ အစ္စလာမ် မီ ခေါင်းဆောင် နှင့် ရဲဟ်ဗရ် တွေ့ဆုံ / photos
မေ ၂, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၇ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ မနေ့က မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ၏ ဂျေဟာဒ် ဒေ အစ္စလာမ် မီ အဖွဲ့ ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် ရမ်တွာန် အဗ်ဒွလ္လာဟ် နှင့် အဖွဲ့ သည် ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ခါမေနာအီ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဆီးရီးယားစစ်သွေးကြွများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် အစ္စရေးအမြတ်ထွက်ရေး ဦးစားပေး
ဧပွီ ၇, ၂၀၁၆ - ၃:၁၁ ညနေ
ဆီးရီးယားက အစ္စရေးကို အလျော့ပေးမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို ရပ်တန့်ပေးမယ်ဆိုပြီး စစ်သွေးကြွေတွေက ထပ်တလဲလဲ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ ဆီးရီးယား မွဖ်သီချုပ် ရှိခ် အဟ်မဒ် ဘဒ်ရက်ဒင် ဟက်ဆွန်က ယမန်နေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အီရန် နှစ်သစ်ကူးချိန် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရဲဟ်ဗရ် ရေ အင်ကေလာဗ် ၏ မိန့်ခွန်း ပေးနေစဉ် /photos
မတျ ၂၀, ၂၀၁၆ - ၉:၅၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နှစ်သစ်ကူးချိန် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရဲဟ်ဗရ် ရေ အင်ကေလာဗ် ၏ မိန့်ခွန်း ပေးနေစဉ် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
သခင် မကြီး ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ၏ ပထမည မဂ်ျလစ် ရဲဟ်ဗရ် ကျင်းပ / photos
မတျ ၁၁, ၂၀၁၆ - ၉:၀၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာဟ် (စ.အ) ၏ ပထမည မဂ်ျလစ် အား ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှ ဦးဆောင် ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဖွာစေလ် လန်ဂရာနီ ၏ ၉နှစ်မြောက် မဂ်ျလစ် / photos
မတျ ၁၁, ၂၀၁၆ - ၁၂:၀၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ည အချိန်တွင် မရ်ဟွန်မ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မိုဟမ္မဒ် ဖွာစေလ် လန်ဂရာနီ ၏ ၉နှစ်မြောက် မဂ်ျလစ် ကို ကွမ်းမြို့ရှိ သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ မအ်စူမာ (စ.အ ) ၏ ရောင်ဇာတော် ဘေး ရှိ မစ်ဂျစ်ဒ် ဒေ အအ်ဇန်မ် တွင် ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ် ။
အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အား အုပ်ထိန်း သူ ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အဘာစ်ဝါအေဇ် သဗ်ရေစီ ၏ မဂ်ျလစ် / photos
မတျ ၁၀, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၂ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ် အီရန် နိုင်ငံ ခိုရာစာန် ပြည်နယ် ၏ ရဲဟ်ဗရ်ရေ အင်အေလာဗ် ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် နှင့် အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အား အုပ်ထိန်းသူ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အဘာစ်ဝါအေဇ် သဗ်ရေစီ ၏ မဂ်ျလစ် အား ကွမ်းမြို့ ရှိ သခင်မကြီး ၏ ရောင်ဇာတော် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မရ်ဂျာယေ သက္က်လီးဒ် တော်များနှင့် အရေးပါ အရာရောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက် နေရာယူခဲ့ ကြပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်တွင် / photos
မတျ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် အဘာစ်ဝါအေဇ် သဗ်ရေစီ ၏ဂျနာဇာ နမာဇ်ကို ရဲဟ်ဗရ် မှ ဦးဆောင် ဝတ်ပြုပေးခဲ့ပြီး အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်တွင် လည်း ခစားခဲ့ပါတယ်။
မရဟ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အဘာစ်ဝါအေဇ် သဗ်ရေစီ နှင့် ရဲဟ်ဗရ် / photos
မတျ ၄, ၂၀၁၆ - ၇:၄၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ မရဟ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အဘာစ်ဝါအေဇ် သဗ်ရေစီ အားရဲဟ်ဗရ် နှင့် အတူတွေ့ရသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။